Published July 7, 2020 at 10:23 PM CDT
Governor Kim Reynolds dargaggoota jiraattota Iowa irratti coronavirus guddatee jira jedhan. Akka isiin jetteti baay’ee dhukubichaan miidhamu baatanis namni dhukubichaan midhamuu akka qabamu godhan jette.
Kunis ergaa Reynolds irraa deebite Covid-19 percenti 80% himtee namoota umriin deeman fi dhukubaa biraa qaban akka manaa hin bane jette.
State keessati namni dhukubichaan qabamuu guddata waan dhufeef ufiifi namootas akka of eeggannoo fayyaa godhanwaamicha goote.
Reynolds namni baayinnan virus qabamuu shufeertota akka taa’an himte akkasumas murtii seera tokko tokko kaahun nimala jette.
Guyyaa Har’a Gov. Kim Reynold’s akka gabaastetti $50,000,000 seera federaalatin kan murtaahe karaa CARES Act Iowa mental health care akka hojiirra olchituu himte.
Federal government akka jedhetti bisnasoonni Iowa 6,000 liqii $150,000 fi isaa ol qophii paycheck protection akka fudhatan himan.
Sioux land public media akka laaletti PPP database fi found businesses magaala Sioux City liqii million $5 fi $10 argate. Thompson Electric Company nijira. Maallaqichi hoji dhabdoota 317 qarqaaraniin akka federal governmenti himetti.
Warri Nebraska dalagaa isaani kan dhaban irra deebi’anii dalaga soqachuu qabani benefit isaanille argachuu yoo fedhaan. akka durataa’an kutaa official akka karoora isaani himanitti Gov. Pete Ricketts july12 irraa dalgaa soqachuun akka jalqabamu ajajee jira. Pete qara akka jedhetti March 15 irraa sababa dhukuba corana virus ummata akka hojii dhabdummaa guutatan hayyame, akkasumas bisnasoota akka cufamu fi ummanii dalagaa irraa bahaan ajajee ture.
Local NewsLocalIowaNebraskaSouth DakotaIowa Governor Kim ReynoldsnewsCOVID-19OromoCARES Act
The number of deaths in the Sioux City metro area due to COVID-19 reached 80 on Wednesday after local health officials reported the death of an older man…
Hiriira nagahaa namoota hedduun lakkaahaman magaala Sioux City downtown sababa namni baaye Ethiopia kessati midhamanii fi hidhameef bahuun himame.Miseensi…
Manni fayyaa Dakota County namni tooko sababa COVID-19 du’uu fi namni lama dabalataan qabamu gabaasan, walumaa galatti namni qabame 1,785 yoo ta’u kan due…
Manni fayyaa Sioux land namni baayen dabalataan magaala Woodbury County keessati corona virus qabamuu gabaasan, waliigalatti namni qabame 3,245 gaheera.…